I-Anycubic i3 Mega: iphrinta yekhwalithi ye-3D engaphansi kwe- € 300 | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Amaphrinta we-3D aya ngokuya ethandwa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe buyakhula, ngakho-ke ikhwalithi yale mishini iya ngokuya iba phezulu, kube nemiphumela engcono namanani ashibhile. Isibonelo salokhu kuziphendukela kwemvelo yi I-Anycubic i3 Mega, iphrinta enconywe kakhulu enenani elingaphansi kwama- € 300. Isithembiso esingacabangi uma ucabangela imiphumela nezici zalo mshini.
La Umkhiqizo we-Anycubic inemishini yokuphrinta eminingana ethakazelisa kakhulu. Phakathi kwabo le i3 Mega model. Yinkampani yaseChina eyasungulwa ngonyaka ka-2015 eShenzhen, enabasebenzi ababalelwa ku-300 abasebenza lapho ukudala le mikhiqizo. Kuqeqeshwe kwamanye amanyuvesi abaluleke kakhulu emhlabeni wonke ukuqinisekisa ukuthi banethalente elidingekayo lokujabulisa noma yimuphi umenzi ofuna ukuphrinta izinto zakhe.
Abanye abagxeki basikisela lokho I-Anycubic i3 Mega yiphrinta ye-3D ehamba phambili ye-2019 engaphansi kwe- € 300, futhi akuyona engezansi. Ufuna ukwazi ukuthi kungani?
1 Izici ze-Anycubic i3 Mega
1.1 Isifinyezo sezimpawu zobuchwepheshe
2 Izinzuzo nobubi be-Anycubic i3 Mega
3 Ungathenga kuphi iphrinta nokufaka okunye esikhundleni sayo
3.1 Ungathenga kuphi iphrinta ye-3D?
3.2 Ungayithenga kuphi intambo yokuphrinta efakwa esikhundleni?
Izici ze-Anycubic i3 Mega
La I-Anycubic i3 Mega iphrinta esezingeni eliphakeme, ngesiqinisekiso (ngensizakalo enhle yezobuchwepheshe kanye nosizo lwangemva kokuthengisa) nokumelana nokuba nevolumu ephezulu yokuphrinta ngaphandle kokuthi ilimale kalula. Amandla wokuphrinta asekela izingxenye zekhwalithi yokuphrinta efinyelela ku-210x210x205 mm, okungukuthi, lokho ungasebenza ngezicucu enkulu, okuthile abanye abaphrinta abangakuvumeli ngalezi zintengo.
Kuzindatshana eziningi ngithe ungaphrinta ezinye izingcezu ezisetshenziselwa i-DIY, ngoba ngakho ungakwenza ...
Kufaka eyodwa isikrini sokuthinta lapho izokhombisa yonke imininingwane yokusebenza, njengamazinga okushisa asebenzayo ekhanda noma e-extruder, isikhathi sokuphrinta, njll. Ukuba othintekayo, kukuvumela ukuthi uyisebenzise ngqo ngaphandle kokusebenzisa izinkinobho ngendlela enembile kakhulu.
I-Anycubic i3 Mega nayo iqinisekisa ukuphela okuhle kwezingxenye eziphrintiwe, ezinekhwalithi ephezulu. I- izinto ezisekelwayo yi-PLA ne-ABS, phakathi kokunye okuvumela imicu emihle. I-spatula ekhethekile ifakiwe kukhithi yokususa imicu eyedlulele ngemuva kokuphrinta ngakunye. Ngaphezu kwalokho, inomtshina we-filament, ngakho-ke uma "uyinki" uphela, uzomisa okwesikhashana ukuze ukwazi ukufaka esikhundleni sokuthengwayo bese uqhubeka lapho ibiprinta khona, ngaphandle kokulahla ingxenye leyo.
Iphrinta ayihlanganisiwe, kepha umhlangano wayo ulula futhi uyasheshanoma ngabe awunaso isipiliyoni. Konke kunembile, ngakho-ke umsebenzisi ongakaze abe nephrinta yalolu hlobo, ngeke aze adinge nokufunda imanuwali. Kunganela kuphela ukuqinisa izikulufu eziyi-8 bese ufaka imigqa emithathu nokunye okuncane.
Futhi uma ucabanga ukuthi ingenye yaleyo mikhiqizo esezingeni eliphansi yamaShayina, iqiniso ukuthi yonke imikhiqizo eyenziwe yi-Anycubic inayo Isitifiketi se-European CE, ukuqinisekisa ukuthi iphephile kuzo zonke izici, futhi nezinye ezifana neCCC, neRoHS (ezemvelo).
Uma uvula ibhokisi lalesi phrinta livame ukufaka Iphrinta ye-Anycubic i3 Mega 3D, i-spatula, imemori khadi ye-8GB SD, umhlahlandlela womsebenzisi osebenzayo, i-spare set hotend, intambo yokuhlola umbala engahleliwe, ikhithi yethuluzi, isibambi se-spool ne-spool. Ngakho-ke, ungayihlanganisa bese uqala ukuphrinta ukuyivivinya noma ngabe awuthenganga intambo ...
Isifinyezo sezimpawu zobuchwepheshe
Control: okulula ukuyisebenzisa touch screen. Inememori yokukwazi ukuqala kabusha ukuphrinta uma kwenzeka amandla ecima bese iqhubeka njengoba ubona kusibalo esedlule seHulk. Futhi, uma intambo iphela, iyama isikhashana bese iyaqhubeka lapho ufaka i-spool entsha kuyo. Ngaleyo ndlela ngeke uchithe isikhathi noma okokusebenza kokuvelayo okusele uhhafu ...
Ubuchwepheshe bokumodela: I-FDM, okungukuthi, ngokufakwa kwento encibilikisiwe.
X / Y / Z ukuma ngokunemba: 0.125mm ye-XY ne-0.002mm ye-Z.
Isendlalelo ukujiya: 0.05-0.3mm
Ijubane lokuphrinta: 20-100 mm / s
Izinto zentambo ezisekelwayo: 1.75mm nge-PLA, ABS, HIPS, Wood, TPU, kanye nezinto ze-PETG
Nozzle ubukhulu: 0.4 mm
I-Temperatura de trabajo: umlomo wombhobho we-extruder usebenza ku-260ºC futhi umbhede oshisayo ugcinwa ku-110ºC
Ubukhulu nesisindo: 405x410x453mm no-11 kg
Isoftware yomsiki: Ikhambi
Amafomethi wokufaka / wokukhipha: STL, OBJ, DAE, AMF / GCode
Imodi yokusebenza- Ungathumela amafayela ukuphrinta online nge-USB noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngaphandle kwekhompyutha exhunywe nekhadi le-SD.
Izinzuzo nobubi be-Anycubic i3 Mega
Njengayo yonke imikhiqizo, I-Anycubic i3 Mega inezinzuzo nezinkinga zayo. Yize iqiniso ukuthi iphrinta ye-3D ishiya abasebenzisi abayizama benelisekile, futhi cishe yonke into iyinzuzo uma kuqhathaniswa nokubi okumbalwa. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela, kungcono kakhulu ongakuthola ngaleyo ntengo.
Abanye izibonelo eziphrintiwe Ukuthola umbono wezinga lemininingwane nekhwalithi, unawo esithombeni esedlule. Bheka ikakhulukazi ibhayisikili, nezinga lemininingwane elikutholayo kuketanga.
Incwajana yokufundisa enhle, insizakalo yezobuchwepheshe kanye newaranti
Umhlangano olula nezingxenye zokungcebeleka kufakiwe
Isistimu yokumisa okuzenzakalelayo uma kwenzeka intambo iphela noma iqala kabusha uma kunokusikwa kwamandla.
Umbhede oshisayo (i-ultrasound) ohlala ufudumele ukuze ingxenye ingahambi futhi ithole imiphumela engcono.
Ivolumu enkulu yokuphrinta
Ikhwalithi yephrinta iqeda ukuyinika ukuqina
Fast, enembile interface yomsebenzisi nge touch screen
Isekela amafomethi ahlukahlukene nokuphrinta kwe-SD PCless
Izitifiketi zekhwalithi zokusetshenziswa okuphephile kwamanye amaShayina
Kulula ukuthola imicu ehambisanayo
Isibonelo sekhoyili oyilethayo esivivinyweni singase sibe sezingeni eliphansi
Akulula ukwenza ngcono uma uyidinga.
Ukulinganiswa kombhede kungu-semi-othomathikhi hhayi okuzenzakalelayo ngokuphelele, ngakho-ke kuzofanele ungenelele, yize kungenzima nakancane.
Ungathenga kuphi iphrinta nokufaka okunye esikhundleni sayo
Ungayithola kwamanye amasayithi ukuthengisa online, njenge-eBay, i-Amazon, njll. Kepha uma ubheka insizakalo yamapulatifomu aku-inthanethi, ukukhethwa kwe-Amazon kungcono kwimpahla yezimpahla kanye neziqinisekiso ezinikezwa yile nsizakalo.
Ungathenga kuphi iphrinta ye-3D?
Ku-Intanethi uzothola okunye ukunikezwa kwalolu hlobo olufanayo ngenhla kwe- € 300, okuyizintengo ezibizayo okufanele uzigweme, ngoba ungakwazi thola eshibhile. Eqinisweni, ungayithola Ukunikezwa kwe-anycubic i3 Mega cishe nge- € 279.
Ungayithenga kuphi intambo yokuphrinta efakwa esikhundleni?
Njengephrinta, ungayi-oda kusuka kuyo izinto ezahlukahlukene ezisekelwayo nangemibala ehlukahlukene. Itholakala ezitolo ezikhethekile noma ngokuthengwa ku-inthanethi. Isibonelo, i- I-1 Kg coil ye-PLA enemibala ehlukahlukene cishe ngama- € 20.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » I-Anycubic i3 Mega: iphrinta yekhwalithi ye-3D engaphansi kwe- € 300
I-Flowmeter: konke odinga ukukwazi